Location: Mbido » Ịdee » Na-agbasa News Travel » Newtali Ọhụrụ
Aterlọ ihe nkiri nke dị na Center nke Como - Foto © Elisabeth Lang
Mgbe ị gafere ókè Switzerland / Italiantali na Chiasso, n'otu akụkụ enwere ndị uwe ojii Switzerland na-enweghị ihe nkpuchi mana n'ime naanị mita abụọ, onye ọ bụla yi mkpuchi, nke ahụ bụ Italy.
O juru m anya na ọ dịghị ndị kwụ n’ahịrị na-abanye na-adọba ụgbọala na etiti nke Como ebe ọ na-abụkarị n’oge ọkọchị, mmadụ ga-echere ruo mgbe ụgbọ ala ga-apụta, mana ebe a na-adọba ụgbọala adịghịzi.
Kedu ihe dị egwu ịhụ Como ka efu.
Como - Foto © Elisabeth Lang
Mana o nwere ụfọdụ elele, dịka enweghị nsogbu na-adọba ụgbọala ma ọ bụ na-ejide tebụl maka kọfị, mana ọ bụ ihe ịtụnanya niile. Masks bụ iwu n'ebe niile, ọbụlagodi n'èzí ọtụtụ ndị na-ewere ya nke ọma.
N'ụzọ dị iche, n'afọ gara aga Lake Como bụ isi na-akwụsị akwụsị ma nwee oge ọkọchị. Hotels na-agba ọsọ na 90% ebe obibi na-agbakwunye mmụba nke 11% na ndị njem njem na ụba nke 14% na ndị mbata mba ọzọ.
N'ime ọnwa 3 mbụ nke 2020, ntinye akwụkwọ na-abata kwere nkwa ịbụ afọ ndekọ ọzọ.
Mana nke ahụ gbanwere na mberede na COVID-19 coronavirus nke na-ebute ndekọ-agbaji nke ịkagbu na March na Eprel 2020.
A kagburu nnukwu oriri agbamakwụkwọ nke esenidụt tụrụ anya otu afọ n'ihu. Ndị uwe ojii na-achịkwa iji jide n'aka na ọ nweghị onye hapụrụ ụlọ ha, ebe Como na mpaghara Lombardy dum gara mkpọchi site na Machị 11 ruo June 4, 2020.
Nkwụsị njem njem na oge mgbe LARIO (mpaghara Lake Como) na-ebugharị na ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ na-abịa njem nleta pụtara mfu nke 120 nde euro na njem n'ime ọnwa 3.
N'ime afọ 10 gara aga site na 2009 ruo 2019, Lake Como ahụwo mmụba na-aga n'ihu ruo 32.8% na ndị mbata, na-enweta ego karịa azụmaahịa metụtara ndị njem 23,000 ma na-agbakwunye 20% nke uru akụ na ụba na Lario. Gịnị kpatara Lario? N'ihi na Lake Como na Western Lombardy ka a makwaara dị ka Lario, mgbe Latin gasịrị: Larius Lacus ma bụrụ ọdọ mmiri nwere oke mmiri na Lombardy.
Bellagio - Foto © Elisabeth Lang
N’izu gara aga, ọnụọgụ 2019 nyere ọrụ Lario na mba ụwa, Guiseppe Rasella kwuru, bụ onye na-ahụ maka njem nlegharị anya na Igwefoto Comercio (Chamber of Commerce).
Dika ndi rutere, Germany na-eduzi 239,000 nke ruru 18.4% nke onu ogugu ndi obia. Nke a na-esote ndị America na 156,000, nhata 12% na mmụba nke 22% maka 2018, maka ngụkọta nke 22.8%; ndị France soro na 119,000; Switzerland na 114,000; na ndị Britain nọ na 110,000.
Enwere mpaghara mpaghara 1,319 na-arụsi ọrụ ike maka mpaghara ndị njem na Lario, nke Como na-ebute ụzọ na nkeji 677.
Ma gịnị na-eme ugbu a?
Eziokwu dị mkpa bụ na a na-akọ nje nje coronavirus urua gara aga. Nnukwu enyemaka!
Dabere na nyocha nke ENIT (agencylọ ọrụ njem njem nke Italiantali), ihe karịrị 48% nke ndị Italitali ga-aga ezumike n'oge ọkọchị a, mana ọnụ ọgụgụ ka ukwuu - 83% - na-anọdụ na Italy.
Masks bụ iwu na --tali - Foto © Elisabeth Lang
Mgbe mkpọchi ahụ gasịrị, na mbụ ọtụtụ ndị Italitali ga-achọ ịla, mana ugbu a, ha na-ahọrọ ịnọ n'ụlọ dị nso na-achọpụta Bel Paese nke na-anabata ndị ọbịa si n'akụkụ ụwa niile. Oge mgbake site na njedebe ga-adị iche na ọ ga-adabere na etu ha si adabere na ahịa mba ụwa na mmaliteghachi nke ntụkwasị obi ndị ahịa.
Agbanyeghị, afọ a ga - abụ mmaliteghachi nke oge ochie mgbe ọtụtụ narị afọ gara aga ndị bara ọgaranya si Milan (50 kilomita dị anya) wuru ụlọ obibi ha mara mma na ọdọ Ọdọ Como ebe ndị si mpaghara Como bịara maka ezumike na ọdọ.
N'oge nke oge a, anaghị ahụkarị ndị njem Italitali na Lake Como n'ime iri afọ ndị gara aga - ọ bụ karịa Cambodia karịa Como, karịa Berlin karịa Bergamo, na China bụkwa nhọrọ ọzọ na-atọ ụtọ.
Ka ọ dịgodị, ndị a ma ama si n’akụkụ ụwa nile bịara ma na-azụta ụlọ ndị dị gburugburu Lake Como, ebe ndị mgbasa ozi mba ụwa na-aga eme nchọpụta Clooney. N'oge okpomọkụ ikpeazụ, President Obama bịara ma nọrọ na Clooneys na Laglio ma soro ndị helikopta na ụgbọ ala nchekwa 6 maka nleta nzuzo ya.
Mmadu ole na ole a ma ama na-enubata n'okporo ámá ndị dị warara nke Como na ndị njem nleta na-echere ndidi (mgbe ụfọdụ ọtụtụ awa) ịzụta tiketi maka ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri.
N'oge okpomọkụ a, ihe niile dị iche. Enweghị nchere, enweghị ahịrị, na saịtị ndị mara mma dịka Villa del Balbaniello, Villa Carlotta, na Villa Olmo, wdg, na-adị mfe ịnweta ma kwesịrị ịdị na ndepụta ga-ahụ.
Concordia - Foto © Elisabeth Lang
Ma olee ebe ndị COMASCHI (ndị si Como) na-aga maka ezumike ha? Italy na Lario!
Onye CNN, onye nwe obodo India, Mukesh Ambani, bụ onye na-ahụkarị mmanụ gas-telecom conglomerate Reliance Industries gosipụtara Osimiri Glamourous Kachasị Glamourous na ụwa afọ gara aga bụ onye ruru ndepụta ahụ nwere ihe ruru ijeri $ 51.4 ijeri maka afọ iri na abụọ n'usoro, mere emume nke nwa ya nwanyị maka otu izu na oke osimiri nke Lake Como. Ihe karịrị narị mmadụ asaa si mba dị iche iche bubata.
Yabụ, gịnị mere nwoke kacha baa ọgaranya nke India ji họpụta Lake Como dị ka ebe nwa ya nwanyị ga-etinye aka?
Ọfọn, ọdọ ahụ bụ ịma mma ile anya, yana ọnọdụ ya, ya bụ, ,tali, achọghị nbata. Mba ole na ole n'ụwa nwere ike ịnya isi na ọdịbendị bara ụba, nri, na ije dị ka .tali.
Na ịma mma ya dị oke egwu na ugwu na-acha akwụkwọ ndụ ma na-ejupụ ihe omume na-eme, Italytali na-achịkwa mgbe niile ka ọ nọrọ "n'elu" nke ndepụta niile, ka Panchiali Dey si India na-ede.
Agbamakwụkwọ Mega abụghị nke a na-ewu n’afọ a n’ihi ọrịa a na-efe efe, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole ka a na-anabata ịbịa, nke a mere ka ọtụtụ ndị na-eme atụmatụ agbamakwụkwọ pụọ n’ahịa. N'elu nke ahụ, ọ bụ naanị ụgbọ elu ole na ole ruo ugbu a etinyela Milan na igwe nyocha ha.
Achọpụtakwara na n'agbanyeghị nbelata uto akụ na ụba nke mere ka ihe karịrị ọkara nke ndị 100 kachasị baa ọgaranya nke India tufuo ego, Ambani enwetala ọgaranya, na-agbakwunye ijeri $ 4.1 na akụ ya n'afọ gara aga.
N'oge okpomọkụ a ihe niile dị iche. Enweghị ndị nche ahụ, Bollywood, Hollywood, na ndị Italitali bụ ndị na-achọpụta ingtali nke ha.
Ka ha si na mkpọchi ọnwa atọ pụta, ụmụ nwanyị jikere nke ọma na-echesi ike n'ihu ụlọ ahịa imeghe n'ụtụtụ. Naanị mmadụ 3 ka 3 ka enyere ka ha banye n'otu oge mgbe ebichara ha ma debe aka ha.
N'ụlọ mmanya ebe m na-etinyere onwe m site na ọtụtụ mkparịta ụka na ndị na-achị ọchị na-enye iwu kọfị, owu na-ama m ugbu a. Ọ bụ naanị m nọ n’ebe ahụ. Barista kwuru na ọ bụ ọdachi, mana nwayọ na-akawanye mma. Nwoke ahụ na kiosk akwụkwọ akụkọ kwuru na March na Eprel ọ hụbeghị onye ọ bụla ma ọlị.
Mana aka anwansi ka dị ma ọ labeghị. Ọ dị mma ịlaghachi Italytali.
Berlin Cambodia China Covid-19 Germany Italy Lombardy Milan Police
Traveldọ aka na ntị maka njem ndị German maka Tanzania, Seychelles, Mauritius, na Namibia gbara mgba
Njem Nleta Jamaica Na-eme Ihe karịrị Ijeri $ J2 Maka obere azụmahịa
Ịnata Ahịa Scales 2022 Ndị egwu egwu, SWOT...
Explore Uganda meriri nnukwu na ihe nkiri njem nlegharị anya mba ụwa...
A gwọchara onye ọrịa mbụ na otu 2 SARTATE™...
Nsonaazụ nnwale ọhụrụ maka ndị ọrịa nwere...
Anya Metformin maka ọgwụgwọ Macular ...
Atopic dermatitis ihichapụ akpụkpọ ahụ na ọgwụgwọ ọhụrụ